Kiiska kumbuyuutarka ugu fiican ee loogu talagalay Samsung Galaxy tab A7 10.4 SM T500 T505 T507 2020 Soo saare iyo Warshad | Socodka
Kiiska kumbuyuutarka Bluetooth ee loogu talagalay Samsung galaxy tab A7 10.4 SM T500 T505 T507 2020
Ka ilaali hore iyo gadaal kiniinkaaga waxyeellada, xoqida, iyo qubashada. Qolofta dhabarku waxay si ammaan ah ugu haysataa kiniinkaaga kiis khafiif ah oo khafiifa oo xajinaya dhinacyada.
Qolofta dambe ayaa ilaalineysa kiniinkaaga, oo geesaha ilaali.
2. Riix badhanka isku xidhka. Iftiinka Bluetooth-ka ayaa daaran.
Dhererka x Width x Qoto dheer: 254 mm x 174 mm x 15 mm
Baaxadda: 10.4 ”Naqshadeynta: kiiska kumbuyuutarka xadhigga lagu rakibo
Hore: Slim stand folio case for ipad mini 6 kiiska maqaarka casriga ah ee ipad mini 2021 cusub
Xiga: Kiis Naxdin leh oo leh Hufnaan Daahsoon oo Loogu Talagalay iPad Air 4 10.9 inch 2020 Release